Kunyengetera Nekuzvininipisa Kwakakosha | Upenyu hwaJesu
Kunyengetera Uye Kuzvininipisa, Zvinhu Zviviri Zvinokosha
MUFANANIDZO WECHIRIKADZI INORAMBA ICHIKUMBIRA
Jesu akatomboudza vadzidzi vake mufananidzo unoratidza kuti kuramba uchinyengetera kwakakosha. (Ruka 11:5-13) Iye zvino anofanira kunge ava muSamariya kana kuti muGarireya, uye anodzokororazve nyaya yekusaneta pakunyengetera. Anotaura mufananidzo unotevera:
“Mune rimwe guta maiva nomumwe mutongi akanga asingatyi Mwari uye akanga asingaremekedzi munhu. Asi muguta iroro maiva neimwe chirikadzi uye yakaramba ichienda kwaari, ichiti, ‘Itai kuti ndiruramisirwe kune ane mhosva neni.’ Zvino, kwenguva yakati iye akanga asingadi, asi pashure akati mumwoyo make, ‘Kunyange ndisingatyi Mwari kana kuremekedza munhu, zvisinei, nokuti chirikadzi iyi iri kuramba ichindinetsa, ndichaita kuti iruramisirwe, kuti irege kuramba ichiuya [ichindinetsa].’”—Ruka 18:2-5.
Achiratidza zvinorehwa nemufananidzo uyu, Jesu anoti: “Inzwai zvakataurwa nomutongi wacho, kunyange akanga asina kururama! Saka, Mwari haangaiti here kuti vakasarudzwa vake vanoshevedzera kwaari masikati nousiku varuramisirwe, kunyange achivaitira mwoyo murefu?” (Ruka 18:6, 7) Saka Jesu ari kuti kudii nezvaBaba vake paari kutaura mashoko aya?
Jesu haasi kureva kuti Jehovha Mwari akafanana nemutongi iyeye asina kururama. Pfungwa yake iri pakuti: Kana mutongi asina kururama achizopedzisira anzwa munhu anenge achimukumbira chimwe chinhu, ko kuzoti Mwari! Mwari akarurama uye akanaka uye achapindura kana vanhu vake vasinganeti pakunyengetera. Izvi zvinobuda pachena mumashoko anozotaurwa naJesu ekuti: “Ndinokuudzai, [Mwari] achaita kuti vakurumidze kururamisirwa.”—Ruka 18:8.
Nyaya dzevanhu vakaderera uye varombo hadziwanzotongwe zvakarurama, asi dzevaya vane simba nevane mari dzinowanzotongwa zvetsvete. Asi Mwari haadaro. Kana nguva yakwana, achanyatsova nechokwadi chekuti vakaipa vaparadzwa uye vashumiri vake vawana upenyu husingaperi.
Ndivanaani vane kutenda kwakafanana nekwechirikadzi yemumufananidzo waJesu? Vangani vanonyatsotenda kuti Mwari “achaita kuti vakurumidze kururamisirwa”? Jesu achangobva kupa mufananidzo wekuratidza kuti hatifanire kuneta kana paine chatiri kunyengeterera. Iye zvino anobvunza mubvunzo une chekuita nekutenda kuti munyengetero une simba achiti: “Panosvika Mwanakomana womunhu, chokwadi achawana kutenda kwacho panyika here?” (Ruka 18:8) Pfungwa iri kubuda apa ndeyekuti kutenda kwakadaro kungasawanika muvanhu vakawanda pachauya Kristu.
Vamwe vari kuteerera Jesu vanofunga kuti kutenda kwavainako kwakatokwana. Vanozvivimba vachizviti vakarurama, vachitarisira vamwe pasi. Jesu anoudza vanhu ava mufananidzo unotevera:
“Varume vaviri vakakwira kutemberi kunonyengetera, mumwe muFarisi uye mumwe wacho muteresi. MuFarisi wacho akamira, akatanga kunyengetera zvinhu izvi mumwoyo make, achiti, ‘Haiwa Mwari, ndinokuongai kuti handina kufanana nevamwe vanhu vose, makororo, vasina kururama, mhombwe, kunyange nomuteresi uyu. Ndinotsanya kaviri pavhiki, ndinopa chegumi chezvinhu zvose zvandinowana.’”—Ruka 18:10-12.
VaFarisi vanozivikanwa kuti vanoda kuonererwa pane vanhu kuti vanzi vakarurama chaizvo. Vanowanzoda kutsanya musi weMuvhuro neweChina pavanoziva kuti vanhu vanenge vakawanda pamisika. VaFarisi vanonyatsovawo nechokwadi chekuti vapa chegumi kunyange chezvirimwa zviduku duku. (Ruka 11:42) Mwedzi ichangopfuura, vakaratidza kuvenga kwavanoita vanhu vakaderera vachivati: “Boka revanhu iri risingazivi Mutemo, vanhu vakatukwa.”—Johani 7:49.
Jesu anoenderera mberi nemufananidzo wake achiti: “Asi muteresi amire kure zvishoma akanga asingadi kunyange kutarira kudenga, asi akaramba achizvirova pachipfuva, achiti, ‘Haiwa Mwari, ndinzwirei nyasha ini mutadzi.’” Muteresi uyu anozvininipisa zvechokwadi, achiziva kuti mutadzi. Jesu anopedzisa achiti: “Ndinokuudzai, Murume uyu akaburukira kumba kwake anzi akarurama kupfuura murume uya; nokuti munhu wose anozvikwidziridza achanyadziswa, asi anozvininipisa achakwidziridzwa.”—Ruka 18:13, 14.
Saka Jesu anobudisa pachena kuti kuzvininipisa kwakakosha. Iri izano rinobatsira vadzidzi vake avo vakakurira munharaunda yavaiona vaFarisi vachikoshesa zvinzvimbo. Uye izano rinobatsira vateveri vose vaJesu.
Jesu anobudisa pfungwa ipi nemufananidzo wemutongi asina kururama anozoteerera chikumbiro chechirikadzi?
Jesu achatsvaka kutenda kwakaita sei paachauya?
Vateveri vaJesu havafaniri kuva nemafungiro api ane vaFarisi?
Sei mimwe minyengetero isingafarirwi naMwari? Tinofanira kuitei kuti Mwari atinzwe?
Ona kuti minyengetero yakaita sei isingapindurwi naMwari uye kuti vanhu vaasingateereri.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kunyengetera Uye Kuzvininipisa, Zvinhu Zviviri Zvinokosha